SPC Smart Ultimate, sarudzo ine mari chaiyo | Nhau Gadgets
Miguel Hernandez | 28/03/2022 10:00 | General, Nhare mbozha, Reviews, Nhare
Isu tinodzoka ne SPC, femu yakatiperekedza neongororo dzakawanda mumakore achangopfuura, kunyangwe nguva ino tine mukana wekuona chishandiso icho chingave chisiri chakanyanya simba mutsara webhizinesi rechiratidzo, asi izvo zvisingamborwadzi kurangarira, tiri kutaura nezve smartphones.
Isu tinoongorora iyo itsva SPC Smart Ultimate, sarudzo yehupfumi ine zvese zvaunoda zvehupenyu hwezuva nezuva uye kuzvimiririra kukuru kune avo vane hanya nemutengo.. Ziva nesu hunhu hweiyi SPC terminal uye kana ichinyatsozvimisa seimwe nzira zvinoenderana nemutengo wayo.
1 Dhizaini: Mutengo uye kusimba pamureza
3 Multimedia ruzivo uye kuzvitonga
Dhizaini: Mutengo uye kusimba pamureza
Chokutanga pane zvose, tinowana muviri wepurasitiki, chimwe chinhu chinoitikawo kumashure, kwatine chifukidziro chakagadzirwa nekaviri chidimbu chinotibvumira kupa hukuru hwekubata uye chitarisiko, sei usingatauri, chimwe chinhu chinonakidza. Fyakagadzirwa nepurasitiki nhema kumashure, Hukuru hwese hunoramba huri hwe sensor uye iyo LED flash.
Kuyera: 158,4 × 74,6 × 10,15
Weight: 195 gramu
Iyo yekumusoro chikamu che 3,5mm jack ichiripo, nepo muchikamu chezasi tine USB-C chiteshi matiri matiri kubhadharisa. Bhatani kaviri kuruboshwe mbiri yevhoriyamu uye bhatani re "simba" kurudyi iro, mukuona kwangu, ringadai rakaita kuti rikure zvishoma. Foni ine zviyero zvakati wandei uye huremu hunoperekedza, asi inonzwa yakavakwa zvakanaka uye inoratidzika kunge iine mwero wakanaka wekupokana nenguva nemhedzisiro.
Zvekupedzisira tinazvo akajeka silicone kesi inosanganisirwa mupakeji, pamwe chete netambo yekuchaja, iyo adapta yemagetsi uye zvechokwadi firimu rinodzivirira rekrini rinouya rakaiswa. Dhizaini inoregedza kuenda, ine akadudzwa mafuremu munzvimbo yekumberi pamwe ne "drop-type" kamera.
Iyi SPC Smart Ultimate inoperekedzwa ne processor Quad Core Unisoc T310 2GHz, chimwe chinhu chakasiyana nezvatakajaira kuona neinozivikanwa Qualcomm Snapdragon uye zvechokwadi MediaTek. Chii chimwe, Iyo inoperekedzwa ne3GB yeLPDDR3 RAM. kuti mumiyedzo yedu yakafamba zvakanaka neyakajairwa maapplication uye RRSS, kunyangwe zviri pachena isu hatigone kukumbira kuedza uko, nekuda kwehukuru, hazvigoneke kuti iite.
Iyo ine IMG SimbaVR GE8300 GPU zvakakwana kuti umhanye magirafu ezvikumbiro zvambotaurwa pamwe chete nemushandisi wemashandisirwo, kure nekupa kushanda kunogamuchirwa mumitambo yemavhidhiyo yakaremerwa yakadai seCoD Mobile kana Asphalt 9. Nezvekuchengetedza, tine 32GB yekuyeuka kwemukati.
Iyo ine USB-C OTG
Yese iyi seti yehardware inoshanda ne Android 11 mune yakachena kwazvo vhezheni, chimwe chinhu chinofarirwa, ichibva kune mamwe mabhureki seRealme anozadza skrini yedu neadware, chimwe chinhu icho iwe wanga uchinditevera kwenguva yakareba unoratidzika kunge uchiita. kuti ndive kukanganisa kusingaregererwi.
Izvi zvinoreva kuti honguIsu tiri kuenda chete kutsvaga zviri pamutemo Google application kumhanyisa Operating System zvakanaka, uye iyo yepamutemo application yeSPC.
Palevel yekubatanidza tichava nayo ese 4G network zvakajairika munharaunda yeEuropean: (B1, B3, B7, B20), pamwe ne3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) uye zvechokwadi GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Isu tine zvakare GPS uye A-GPS pamwe chete WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz uye 5GHz inoperekedzwa nekubatanidza Bluetooth 5.0.
Inokwevera pfungwa dzedu kuti tinoenderera mberi nesarudzo ye farira FM Radio, chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinofadza imwe chikamu chevashandisi. Kune rumwe rutivi, tireyi inobviswa ichatibvumira kuisa maviri NanoSIM makadhi kana kuwedzera ndangariro kusvika 256GB zvimwe.
Multimedia ruzivo uye kuzvitonga
Tine skrini 6,1 inches, IPS LCD panel iyo ine kupenya kwakakwana, kunyange zvazvo ingave isina kujeka mumamiriro ekunze ane chiedza chakanyanya chepanyama. Iyo ine zvakare chikamu chechikamu che19,5: 9 uye 16,7 miriyoni mavara, ese kupa HD + resolution, kureva, 1560 × 720, ichipa mushandisi density ye282 pixels painch.
Chidzitiro chine gadziriso yeruvara rwakakwana uye pani iri pachena yakachipa. Ruzha, kubva kumutauri mumwe chete, rine simba rakakwana asi harina chimiro (nekuda kwezvikonzero zvemutengo zviri pachena).
Panyaya yekuzvitonga tine a 3.000 mAh bhatiri, kunyangwe nekuda kwekukora kwechigadzirwa tingadai takafungidzira kuti chingave chakawanda. Isu hatina ruzivo maererano nekuchaja kumhanya, kana tikawedzera kune iyo iyo isina kuisirwa mubhokisi (zvisinei nehukuru hwayo) hapana adapta yemagetsi, nekuti isu tine dutu rakakwana.
Nekudaro, lIyo 3.000 mAh inopa mhedzisiro yakanaka kwezuva nehafu kana maviri mazuva tichifunga nezvehunyanzvi hwekugona kwechishandiso uye kuti Operating System yakachena kwazvo, saka isu hatizove nemaitiro asina musoro kumashure.
Iva nekamera yekumashure 13MP inokwanisa kurekodha paFullHD resolution (pamusoro pechidzitiro), hapana Night Mode kana kunonoka kufamba kugona. Kune chikamu chayo, kamera yekumberi ine 8MP yeanopfuura akakwana maselfies. Zviripachena, makamera eiyi SPC Smart Ultimate anoenderana nemutengo wayo wakaderera uye chinangwa chayo hachisi chimwe kunze kwekukwanisa kugovera zvimwe zvirimo paSocial Networks uye kutibvisa mudambudziko.
Iyi SPC Smart Ultimate Iine mutengo we119 euros chete, uye handizive kana iwe uchifanira kunge uine chimwe chinhu mupfungwa. Zvishoma zvinodiwa pachiteshi chinodhura zvishoma. Isu tinozviwana isu tiine muponesi, foni inotibvumidza kufona mumamiriro ezvinhu akanaka, kushandisa multimedia zvirimo pamapuratifomu makuru pasina chero rudzi rwekusimba uye kutaurirana nevatinoda kuburikidza neanonyanya kufarirwa maapplication, hapana chimwe.
Inopa Hardware pakukwira kwemutengo, ichikwikwidza zvakananga Xiaomi's Redmi renji, asi ichitipa chiitiko chakachena chakazara, pasina vamiriri, kushambadza kana zvisina basa zvikumbiro. Kunyangwe iwe uchida foni yevadiki, yevakuru kana yechipiri inoponesa hupenyu mudziyo, iyi SPC Smart Ultimate inokupa iwe chaizvo zvaunobhadhara.
Yakatumirwa pa: 28 March we2022
Os yakachena zvachose
panel iri HD
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » SPC Smart Ultimate, sarudzo ine mari chaiyo